Ikati ekhethekileyo ye-Khao Manee | Amakati eNoti
Ikati ye-Khao Manee yenye yezona zikhethekileyo emhlabeni. Unenkangeleko emnandi kakhulu kwaye eqaqambe ngexesha elinye. Ngapha koko, yaziwa ngokuba yiDiamond Eyes, iRoyal Siam Cat, kunye neWhite Jewel, njengoko amehlo ayo eqaqamba.
Ngaba ungathanda ukwazi ngakumbi ngolu hlobo luhle? Ke, ungaphuthelwa koku kukhethekileyo apho siza kukuxelela imbali yayo, iimpawu zayo, inkathalo kunye nokunye okuninzi.
1 Imbali ye-Khao Manee
4 Uzikhathalela njani?
5 Uyifundisa njani ikati ye-Khao Manee?
Imbali ye-Khao Manee
Umlinganiswa wethu oneenwele inemvelaphi yayo eThailand, apho inkosi endala uRama V yazinikezela ekubakhuliseni. Sisilwanyana esitsala umdla omkhulu, ngenxa yoko sikhawuleze saba sesona sithandwa kakhulu ngexesha lokulawula kwakhe (1868-1910). Emva phayaa, wayebizwa ngokuba yi-Khao Plort, okuthetha ukuba "umhlophe kwaphela." Kwaye umhlophe ngokuchanekileyo ngowona mbala mhle sinokuba nawo isilwanyana. Kakhulu kangangokuba kwindawo yabo yemvelaphi kukholelwa ukuba aba boboya batsala ithamsanqa kunye nolonwabo.
Nangona kunjalo, Olu hlobo aluzange lushiye iThailand kude kube ngo-1999, xa iAmerican Colleen Freymouth yamkela eyokuqala yaza yayizisa eUnited States. Yinto, ke ngoko, incinci kakhulu eyaziwayo kwaye kunzima ukuyifumana xa ithengiswa, kwaye xa ifunyenwe ixabiso liphezulu njengoko siza kubona kamva.
I-Khao Manee yikati ye-albino yaseSiamese enobunzima obuphakathi kwe-3 kunye ne-6kg, enomzimba okhuselweyo ngengubo yoboya obufutshane obumhlophe.. Amehlo, elona candelo livela kakhulu kuye, anemibala eyahlukeneyo: omnye uya kuba luhlaza okwesibhakabhaka ukanti omnye umbala otyheli okanye omthubi. Ezi zimile okweqanda. Imilenze ibanzi kwaye yomelele, kwaye umsila ubanzi ezantsi kwaye ubude.
Ngezizathu zofuzo, ezi felines zihlala ozelwe esisithulu okanye osisithulu ngokuyinxenye. Kodwa kufuneka kuthiwe ukungeva kwiimodeli zamva nje kuyancipha.
Obu boya buncinci sisilwanyana esithandekayo. Konwabele ukuba kunye nosapho, ufumana ukutotocwa kubo, kwaye ngoba? Ukwanga. Uthanda kakhulu ukuba nabanye, kwaye uyavana naye wonke umntu: abantwana nabantu abadala. Unomntu ophumayo kwaye onomdla, okwenza ukuba abe ngumhlobo obalaseleyo.
I-Khao Manee ekhaya kakhulu, Oko kuthetha ukuba ayinasidingo sokunyanzelwa ukuba uphume phandle, umzekelo, ikati yase-Bengal inokuba nayo. Nangona kunjalo, ukuba ufundiswe ukuhamba ngehashe, ngokuqinisekileyo uya kuba nexesha elimnandi.
Ukulungiselela impilo kuphela, ukuqaqamba kweenwele kunye namazinyo asempilweni, Uyacetyiswa ukuba umnike ukutya (okomileyo okanye okumanzi) okungenazinkozo. Ezinye iindlela kukutya kweYum okanye kweBarf, kodwa okokugqibela kufuneka kwenziwe phantsi kwengcebiso yezilwanyana.
Yikati leyo Kufuneka uxukuxe yonke imihla, Kanye okanye kabini, kunye nekhadi umzekelo. Kwakhona, ixesha nexesha unokukhetha ukubeka ibhulashi-glavu, uthathe ithuba kwaye uyinike umyalezo ngelixa ususa zonke iinwele ezinokuthi zifile.
Ngokubanzi, iyikati esempilweni kakhulu, kodwa ithathela ingqalelo ukuba luhlobo olunokuzalwa luzizithulu kubalulekile ukuba umse kugqirha wezilwanyana ayokuvavanywa kwaye ndikuxelele indlela yokwenza ukuba kunjalo.
Uyifundisa njani ikati ye-Khao Manee?
I-Khao Manee yikati ezolileyo, enomlinganiso olungeleleneyo, ngenxa yoko akuyi kuba nzima kuwe ukumfundisa. Ngalo nto, Kufuneka ube nomonde, kwaye ngaphezu kwako konke ungaze ulahle imbeko kuye. Ngexesha lobutsha bakhe angangalawulekiyo, ke kuya kufuneka uphinde izinto amatyeli aliqela.
Umzekelo, ukumfundisa ukuba angaluma, iqhinga elilula kodwa elisebenzayo (nangona kuthatha ixesha ukuba afunde) zezi zilandelayo:
Ukuba uyabona ukuba uza kukuluma, kwangoko umbonise intambo, isilwanyana esifakiweyo, nantoni na anokuyiluma.
Kwaye udlale ngayo okwethutyana.
Ukuba sele belumile, gcina isandla okanye unyawo lwakho lumi nkqo. Ke uzakuyikhulula. Emva koko, mkhuphe esofeni kwaye ungamhoyi de aphole.
Kungekudala uza kudibanisa ukuluma kunye 'nokungenzi nto', into eya kumkholisa kwaye uya kuzama ukuyiphepha ngokuchanekileyo ngokungakukhathazi.
Ewe, Kubaluleke kakhulu ukuba xa unxibelelana naye ungenzi iintshukumo ngequbuliso. Yiba nobuqili. Musa ukumnyanzela ukuba enze nantoni na ayifunayo kuba kungenjalo ngekhe abe yikati eyonwabileyo, kodwa eyahlukileyo.
I-Khao Manee luhlobo olubiza kakhulu, lolunye lwezona zininzi. Ke ngoko, ayifanele ikumangalise into yokuba indlu yenja yobungcali ikubuza 6000 euro yenjana.
Ukuba ufuna ukubona ezinye iifoto zesi silwanyana sihle, sonwabele kwezi sikushiya apha ngezantsi:
Umfanekiso - Purrfectcatbreeds.com
Umfanekiso - Izilwanyana zasekhaya.co.uk
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iikati zikaNoti » Amakati » Ikati entle ye-Khao Manee
UAdrian mancera sitsho
icaciswe kakuhle kodwa kubonakala kum ukuba ezinye iikati ze-Khao Manee zinombala wamehlo aluhlaza kancinane, kodwa kungenjalo kakuhle.
Ndacinga ukuba inkathalo yakhe iboniswe kakuhle kwaye neefoto zazintle kakhulu ngendlela
Kodwa ndifuna ukwazi ukuba isulungeke kangakanani na, ngamanye amagama iyinyani, ndicinge ukuba kunyanzelekile ukuba ndibeke iingcebiso ukuze ndikwazi ukuthenga iikati.
Phendula uAdrian Mancera
Ikhadi lokondla iikati ezilahlekileyo?